Enwere m ike ịbanye maka mmeghari paspọtụ Philippines? - zuru ike na mba ndị na-ekpo ọkụ
OFW nwere ike ịbanye maka mmeghari paspọtụ?
Enwere m ike ịnyefe mmegharị paspọtụ m n'onwe m?
Achọrọ m ịme oge maka mmeghari paspọtụ Philippine?
OFW nwere ike imeghari paspọtụ na-enweghị ọkwa?
Enwere m ike ịga ozugbo na DFA na-enweghị ọkwa 2020?
Kedu akwụkwọ achọrọ maka imeghari paspọtụ?
Enwere ntaramahụhụ maka imeghari paspọtụ n'oge?
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji megharịa paspọtụ Philippine?
IDS ole ka achọrọ maka ngwa paspọtụ?
DFA ọ na-ekwe ka ndị chọrọ ịbanye? Ọ bụ naanị ikpe dịpụrụ adịpụ na ihe mberede ka a na-anabata na ije ije na Courtesy Lane na DFA Aseana na ụlọ ọrụ Consular ndị ọzọ na Philippines. Ndị anamachọihe na-abụghị ihe mberede ga-enwerịrị oge ọnlaịnụ na passport.gov.ph.
Taa, OFW adịghịzi mkpa ịhazi oge nhọpụta iji megharịa paspọtụ ha. Naanị banye gaa na DFA NCR Central (Robinsons Galleria) wee gaa ozugbo na ebe ọhụrụ paspọtụ OFW raara onwe ya nye.
N'ime United States: Ị ga-etinyerịrị akwụkwọ anamachọihe gị, gụnyere akaebe ịbụ nwa amaala, foto nke ID, foto na ụgwọ, n'onwe ya na ebe nnabata paspọtụ. Ị nwere ike tozuo itinye akwụkwọ n'onwe gị na ụlọ ọrụ paspọtụ ma ọ bụrụ na ị na-eme njem ngwa ngwa.
1. NKWU ONWE ONYE NA-achọrọ mgbe niile na ngwa bụ naanị oge atọrọ. 2. Maka ngwa na Consulate, biko chekwaa oge site na Global Online Appointment System (GOAS) site na ịnweta njikọ ndị a: https://www.passport.gov.ph.
Mara ihe banyere usoro n'okpuru. OFW adịghịzi mkpa ịhazi oge ọhụhụ n'ịntanetị site na webụsaịtị DFA. Kama, ị nwere ike Naanị gaa na DFA NCR Central dị na Robinsons Galleria wee gaa na ebe ọhụrụ paspọtụ OFW., ebe nchekwa akwụkwọ ikike ngafe raara onwe ya nye maka OFW. Ha na-ahazi akwụkwọ site na 8am ruo 12NN.
Nke a dị mkpa: Ị jụrụ: Ego ole ka ọ ga-eri ibi na Indonesia?
Mba, ma ọ bụrụ na onye na-arịọ arịrịọ bụ agadi, obere, ma ọ bụ PWD nke ga-achọ ntuzi aka ọzọ, enyemaka, na nlekọta, anaghị anabata ndị njem n'ụlọ ọrụ Consular DFA. Ekwesịrị m ịkwụ ụgwọ na ntinye akwụkwọ? Ịhọpụta paspọtụ bụ n'efu.
Akwụkwọ achọrọ maka mmeghari paspọtụ
Paspọtụ ochie mbụ.
Mpempe akwụkwọ nke onwe nke abụọ mbụ na ibe abụọ ikpeazụ nke paspọtụ ahụ.
Mpempe akwụkwọ ECR/Na-abụghị ECR gosipụtara onwe ya.
Mpempe akwụkwọ nleba anya n'onwe ya, ọ bụrụ na ọ dị, nke ndị ikike na-enye akwụkwọ ikike ngafe mere.
Mba. Ị nwere ike imeghari paspọtụ mebie gị oge ọ bụla ịchọrọ. Agbanyeghị, anyị na-akwadosi ike ka ị nweta paspọtụ ziri ezi nke nwere opekata mpe ọnwa asaa ruo asatọ (7-8) tupu ịme atụmatụ njem ọ bụla. … Enweghị ntaramahụhụ maka nnọchi paspọtụ mebie gị.
Maka mmeghari paspọtụ, achọrọ ọdịdị onwe onye na Consulate General Philippine dị na Toronto maka ijide data biometric. Nhazi na-ewe gburugburu izu asatọ (8).. N'ọnọdụ nke ọdịda ike kpatara ọgba aghara ihu igwe na Philippines, nhazi ahụ nwere ike were ogologo oge.
Iji nweta paspọtụ, ịchọrọ 1 ID na akwụkwọ nkwado 2 na mgbakwunye na asambodo ọmụmụ NSO na akwụkwọ anamachọihe gị. Na mbụ, achọrọ akwụkwọ nkwado 3, mana ugbu a DFA chọrọ naanị 2.
Ego ole ka visa Cambodia E na-eri?
Ajụjụ gị: Kedu WIFI kacha mma na Malaysia?
Azịza ngwa ngwa: Kedu ka m ga-esi mepee ụlọ ọrụ na Vietnam?
Ego ole bụ nri na Laos?
Enwere mwepu na Philippines?
Kedu ọkwa Philippines n'ihe gbasara sayensị na teknụzụ?
Indonesia ọ mara mma karịa Malaysia?